Mareykanka, oo Fariin u soo diray Farmaajo & Rooble “Maxaa loo sheegay? – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
October 14, 2021 Farah Abdulkadir Mohamed 5
MUQDISHO(P-TIMES) –Dawladda Mareykanka ayaa war qoraal ah oo ay soo sartay ugu yeertay madaxda dawladda Faderaalka ee SOomaaliya dadajinta arrimaha doorashooyinka & xalinta khilaafka dhexdooda kahor dhammaadka sannadkan, waxaana loogu sheegay in ay muhim tahay in horey loo wado geedi socodka doorashooyinka ee dalka.
Wada hadalo gaar ah oo ay shalay ku yeesheen xarunta wasaaradda arrimaha dibada Mareykanka ee Washignton wasiirka arrimaha dibada Soomaaliya & Madaxda Mareykanka ayaa diiradda lagu saaray arrimaha ku saabsan Amniga & doorashooyinka.
War qoraal ah oo kooban kana yimi Washignton, markii uu dhamaaday shirkaas ayaa loogu sheegay Madaxweyne Farmaajo & Raysalwasaare Rooble in laga doonayo in ay dadajiyaan doorashooyinka, ayna xaliyaan khilaafkooda kahor dhammaadka sannadkan.
Golaha Wadatashiga Qaranka ee arrimaha Doorashooyinka hogaamiya oo ay ku mideysan yihiin Raysalwasaare Rooble & Madaxda dawlad gobaleedyada ayaa loogu sheegay qoraalka in ay waajib tahay in ay dadajiyaan qabashada doorashooyinka oo aan dibu dhac la aqbali karin.
Waqti u qabashada in ay xaliyaan khilaafkooda ayaa durba lagu fasirayaa in ay Beesha Caalamka xoojinayso in kahor doorshada ay tahay in ay dhinacyadu heshiis gaaraan ayna wajib tahay in taas xooga la saaro, iyadoo ay dhawaan wakiilada fadhigoodu yahay Muqdisho sidaas oo kale daaha ka rogeen.
Ergayga gaarka ah ee QM u qaabilsan Afrika ayaa dhawaan sheegay in daahida doorashooyinka Soomaaliya ay calaamad xun ku tahay geedi socodka Amniga & wada shaqeynta Beesha Caalamka, isagoo tilmaamay in ay muhiim tahay in dadaal lagaliyo arrimaha hortabinta leh.
Farmaajo & Rooble ayaa 90-kii cisho ee lasoo dhaafay u dhaxeeyey khilaaf xoogan oo la xariira arrimaha NISA & Wasaaradda Amniga ee Soomaaliya, cida hogaaminaysa xili ay Beesha Caalamkuna taageertay in dad masuuliyin ah loo dhiibo goobahan, taas oo ka dhignayd in ay diidan yihiin dhammaan xubnaha hadda la magacaabay ee labadaas goobood.
“Mareykanka wuxuu weli ka go’an yahay nabadda, amniga iyo barwaaqada Soomaaliya” ayaa lagu soo gabagabeeyey qoraalka kasoo baxay dawladda Mareykanka.
“Mareykanka wuxuu weli ka go’an yahay nabadda, amniga iyo barwaaqada Soomaaliya”
Allah ayaan ku dhaartay muslimiinta maanta oo somali ku jirto waxay noqdeen 3 qeybood
1, kuwo USA UN IYO EU isku dhiibay oo ku wardiya waxay sheegaana aaminsan
2 kuwa baqay oo yiri anagu hanaloo TALIYO waxaan nahay raaci Shacab,
3 kuwa yar oo ka soo horjeeda gaalo iyo gumeysigooda .
Hadaba adigu isxisaabi xageed ku jirtaa sedaxdaa mid kood kkkkkkkk
Ee somali madaxdooda sidaa loola hadlo waa waxa ay mudan yihiin waayo illah cidna maduleeyo ilaa iyaga ay is duleeyaan .waayo Allah wuxuu inoogu sheegay quraankiisa ” XARIGEYGA QABSADA DHAMAANTIINA HAANA KALA TAGINA” ee adigu aqristow iswaydii xagee looga tagay kitaabkii Allah iyo sunna dii nabigeena (scw) waa inoo haray oo dulinimo ah anigu aqaan.
Wax inoo haray oo dulinimo ah aniga ma,aqaan
Haddii Fuundi iyo Faryaamiiste guri cariish ah dhisanaaya aad tiraahdid waan ku garab-taaganahay aasaa hal Bulukeeti iyo hal musbaar xataa u dhiibi karin intay guriga korkiisa fuulaan
ISKA AAMUS !!
America should shut up
wele qalbi madobo dadbaad hilib wadaagtaan laba halacsayo waxaad tihin hadan lalahayin masiir umadeed baa lagu aaminay waxay udhaqmin sida kuwa makhaaydah fadhiya muranka bilaaba subaxdii ilaa galabtii natiija ku dhamaataa taasu talada daanyeerka habeenkii markeey isuyimaadaan tala lagaara wax ku oola subaxdii qorxtu markeey soobaxdo ayaa ninba meel udhaqaaqi nin quwaax hela nin qaroon hela arli waa quud hala qarfsado
Saan qabo labadaas nin midna meesha kuma hayo wax soomaaliweeyn dan u wada ah.Ninwalba meesha waxuu u joogaa danihiisa iyo hala yiraahdo Hebal waa madax sare.Afar sano iyo bar Ina Farmaajo maxuu u soo qabtay soomaaliweeyn?Wax yar qabay laakiin wixii laga filayey nuskeed ma uu qaban oo wakhtigii waxuu ku dhammeeyey cadaadinta Jubbalaan iyo Puntlaan.Ninka la yiraado M.X.Rooble waxaan filayaa in uusan ahayn nin ad adag oo soomaali isu keeni kara.Sababtoo ah markii uu tagay puntlaan baa wax laga wada hadlayey suu wuu xanaaqay oo uu diiday CASHADII MARTIQAADKA EE LOO SUUBIYEY.
DAAWO: Ra’iisul Wasaare Rooble oo ku dhawaaqay dhaqaale XFS ugu talagashay Gurmadka Abaaraha
Xirsi Cali Xaaji oo loo doortay Guddoomiyaha xisbiga Waddani, Maxaan ka naqaan?
Taliban oo ugu dambeyn afka furatay Turkeyna garab ka dalbatay maxaa soo kordhay